फलफूल र तरकारीबाट कोरोना सर्छ कि सर्दैन ? पैसामा कति दिनसम्म रहनसक्छ कोरोना ? – Rapti Khabar
Posted on August 19, 2019 Author Rapti Khabar
काठमाडौं : पूर्व युवराज पारस शाहले त्रिभुवन विमानस्थलमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि हातपात गरेका छन्। आमा र छोराछोरीलाई थाइल्यान्ड जान लागेका बेला विमानस्थलमा बिदाइका लागि पुगेका पारसले ड्युटीमा रहेका प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) लाई हातपात गरेका हुन्। ती प्रहरी अधिकारीले कार्यालयमा उजुरी नगरेको भनिए पनि सो घटनाबारे प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले समेत जानकारी राखेको छ। थाइल्यान्डमा […]
कोरोना भाइरस बिश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहँदा जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीले यसबाट बच्ने उपायबारे आफ्नो अनुसन्धानको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । सो बिश्वबिद्यालयले गहन अध्ययनपछि कोरोना भाइसरबाट बच्ने सर्वाेत्कृष्ट उपायसहितको निश्कर्ष बाहिर ल्याएको छ । जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीले कोरोना भाइरसको सक्रमणवाट वच्नका लागि सरल भाषामा तयार पारेको खोजमुलक तथ्यहरुको नेपाली अनुवाद यस्तो छ : १. यो भाइरस […]